महन्थ, उपेन्द्र, राजेन्द्रजी मोर्चाको आन्दोलनमा मारिएकालाई खोई ५० लाख क्षतिपूर्ति ? – YesKathmandu.com
काठमाडौं । झण्डै एक बर्षअघि संविधान जारि नहुँदै असन्तुष्टीका स्वर निकाल्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरु मधेस झरे । मधेस झर्नुअघि बसेको मधेसी मोर्चाको एक बैठकले आन्दोलन सशक्त बनाउन एउटा आतंकबादी संगठन जस्तो अराजनीतिक निर्णय गरे । निर्णय थियो ‘आन्दोलनमा मारिए ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने ।’
उनीहरुले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि संविधान जारी भयो । संविधान जारि गर्दा उनीहरुले बहिष्कार मात्र गरेनन्, संविधानको प्रतिलिपि मधेस क्षेत्रमा जलाए पनि । त्यही बेला मधेसी मोर्चाका नेताहरु कैलालीको टीकापुर पुगे र हिंसात्मक अभिब्यक्ति दिए । त्यही अभिब्यक्तिको परिणाम नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको विभत्स हत्या भयो । र हिंसात्मक आन्दोलनको थालिनी ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा करिव ६२ जना नागरिक र प्रहरीले ज्यान गुमाए । एम्बुलेन्समा राखेर उपचार गराउन लैजाँदै गर्दाका प्रहरीलाई समेत विभत्स र आतंकबादी शैलीमा हत्या गरियो । प्रहरीले पनि आन्दोलनकारीको टाउकोमा गोली दाग्यो । सरकारी दमनले पनि ढुंगे युगको सम्झना मधेस क्षेत्रमा गरायो । यसरी आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले के ५० लाख क्षतिपूर्ति दिए ? ‘मोर्चाको त्यो निर्णय सुरक्षित नै छ’ मोर्चा नेता तथा सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने ‘हाम्रो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बने मृतकका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति दिन्छौ, निर्णयबाट भागेका छैनौ ।’
आफ्नो खस्कँदै गएको राजनीतिक उचाई कायम गर्न संघिय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेसी मोर्चाका नेताले सयौ मधेसबासीलाई आन्दोलनमा होम्याए । परिणाम ५० जनाभन्दा बढिको मृत्यु भयो भने सयौ घाइते पनि भए । आन्दोलनमा क्रममा ४७ नागरिक र १५ प्रहरी मारिएका थिए ।
मधेस आन्दोलनमा मारिएका परिवारकालाई मधेसी मोर्चाले ५० लाख दिनुको सट्टा सरकारले दिएको १० लाख क्षतिपूर्तिमै राजनीति सुरु भएको छ । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेर धेरैले पाइपनि सके’ एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने ‘तर प्रचण्डजी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु अहिले फेरी त्यही निर्णय गरेर राजनीतिक बेमानी गर्दैछन् ।’ ओली सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिइसकेका मृतकलाई पुनः त्यही रकम दिने निर्णय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरुको उपचार खर्चमै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आँखा लगाएको ओलीको आरोप छ । ‘हामीले घाइतेको उपचार खर्च घाइतेलाई दिने निर्णय गरयौ तर मधेसी मोर्चाका नेताहरु घाइतेलाई होइन पार्टीलाई रकम मागे’ ओलीले ब्यङगे गर्दै भने ‘घाइते नेता कार्यकर्ता भएका हुन् की पार्टी ? किन पार्टीलाई रकम दिनु, दिल्लीसम्म लगेर उपचार गराएका हौ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीको यो भनाईप्रति सद्भावना महासचिव सुमनको असहमति छ । ‘आन्दोलनमा २ हजार बढि घाइते भएका थिए, जसमा २७२ गम्भिर थिए तर ओली सरकारले १९ जनालाई मात्र उपचार खर्च दियो’ सुमनले भने ‘हामीले घाइतेको रकम पार्टीलाई दिनुहोस् भनेर ओलीजीसँग कहिलै मागेनौ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई ठाकुरले भने : राजेन्द्रजीके एक बेर फोन क क स्वास्थके बारेमें पुछियौ न’